Ciidamo hor leh oo kasocda mid kamid ah Dalalka Afrika oo Maanta Muqdisho soo gaaray iyo halka la geynayo oo la shaaciyay | Salaan Media
Ciidamo hor leh oo kasocda mid kamid ah Dalalka Afrika oo Maanta Muqdisho soo gaaray iyo halka la geynayo oo la shaaciyay
Waxaa Maanta Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho kasoo dagtay diyaarad gaar ah oo siday ciidamo kasocda Dalka Siiralyoon oo qeyb ka ah Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM.
Ciidamadan kasocda Dalka Siiralyoon ee Maana soo gaaray Magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in tiradooda gaareyso ku dhawaad boqol Askari kuwaa oo la filayo in saacadaha soo aadan usii gudbaan Magaalada Kismaayo oo la qorsheenayo in ay ka howl galaan.
Ciidamadan katirsan AMISOM ee maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho ayaa garoonka Diyaardaha Aadan Cadde waxaa kusoo dhaweeyay saraakiil sar sare oo katirsan Taliska AMISOM ee kusugan Magaalada Muqdisho.
Taliyaha Guud ee Ciidamada AMISOM Andrew Gutti oo ka hadlay soo dhaweynta Ciidankan cusub ee Maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in qeyb ka yihiin Ciidamada AMISOM ayna ka howl gali doonaan qeybo kamid ah Gobolada Dalka.
Waa huruntii ugu horeeyay oo kasocda Dalka Siiralyoon oo kamid ah Ciidamada AMISOM oo soo gaara Magaalada Muqdisho iyadoona Ciidamada Siiralyoon la qorsheenayo in ay qeyb kanoqdaan Ciidamada AMISOM ee ka howlgalaya Gobolada Jubooyinka , waxaana Maalmo kahor qeybo kamid ah Gobolada Jubooyinka soo gaaray Ciidamo kale woo kasocda isla Dalka .